Nzira AI inorerutsa Workforce Management & inovandudza timu morale - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Nzira AI inorerutsa Workforce Management & inovandudza timu morale
Munguva ino yedhijitari, nhamba huru yedata inobatwa nemakambani. Nokudaro, kana yasvika nguva yekuwana chikamu chiduku che data kubva kugungwa saka rinogona kuva basa rinotyisa. Kana munhu achifanira kubata basa rakakura rekugadzirisa maongororwo ekuita, kuronga basa pakukumbira kana kusashanda-nguva, kuronga kuronga pamaminetsi ekupedzisira, nezvimwe. saka havawanzo pfuura nepakati iyo data. basa remaneja nderekupedzisa mabasa e bhizimisi zuva nezuva. Chikonzero chete kushaya nguva. Mumamiriro ezvinhu akadai, kuitira kuti vashandise ruzivo rwekambani kwavari kana pamwe vachipokana neavo, makambani ari kuvimba nawo. chakagadzirwa njere. Aya matekinoroji epamberi uye akagadziridzwa anokwanisa kudhiraivha akananga kuhuwandu hwe data. Pamusoro peizvi, ivo vanovimbika kudzikamisa nekugadzirisa iro rinotora nguva basa iro rinokanganisa iyo vashandi vevashandi.
Zvino mubvunzo urikubvunzwa nemakambani ndewekuti zvinoita sei? Izvo zvinovimbika here kana kuti zvinokundikana mune imwe nguva? Kuti zvirambe zviri nyore uye nekuzvipindura zvese, heino nzira idzo chakagadzirwa njere iri kuita kukanganisa pamusika.
1. Sarudza zvinodiwa nevashandi
Iyo yese AI system inokwanisa kubatsira mamaneja kana vanhu kuti vawane chinodikanwa chevashandi kuitira kuti vasarudze nhamba chaiyo yevashandi vanodiwa pabasa.
Mamaneja anofanirwa kuchengeta track uye kutarisa kushanda kwezuva nezuva kunoda kutarisisa kwakanyanya. Pamusoro peizvi, ivo vanofanirwa kupa tarisiro kune vashandi vavo kubva pakuronga kuenda kubasa. Izvi zvinokonzera kukanganisa bhizimisi ine snafus yekuronga izvo zvinopesvedzera akasiyana dhipatimendi re bhizimisi. Izvi hazviwanzo kuitika muindasitiri yebasa sezvo zvisingade kutariswa kwakakodzera kuronga basa revashandi.
Aya marudzi emabasa anoenderana nemaitiro anoshandiswa munguva yakapfuura kana kunyangwe svondo, zuva, nezvimwe. Semuenzaniso, kana kambani ichida huwandu hwevane mamaneja evashandi neChitatu saka vachazoda maneja maneja webasa Chitatu chega chega. Iyi nzira haizo shanduke mune ramangwana futi. Nekudaro, zvinokwanisika kuita mamwe ezvinhu asingafanoonekwi senge dutu kana tsaona. Pakadai, maneja anofanira kutumira mushandi kana kuvapa zororo.
Zvisinei, chakagadzirwa njere inogona kubvisa zvirinyore mamiriro akadaro neakakwana vashandi vevashandi mhinduro. Ivo vanoshandisa data mapoinzi uye vanoatarisa ivo kuti vaone kudiwa kweramangwana. Semuenzaniso, kana paine mukombe wepasirose pazuva, ipapo AI inogona kutaura kuti kuchave nemotokari yakaderera uye nekudaro hurongwa hwevashandi hunogona kumisikidzwa.
Kunze kweizvi, kune huwandu hwemitambo zviitiko apo AI. Inofunga zviitiko, mazororo uye kunyange misi yekusimudzira mukufungwa kuti vauye nechimwe chinhu chakarurama. Izvi zvinogona kubatanidzwa muchimiro chemuenzaniso we data inogona kubatsira mukugadzira kudiwa pane zvakafanotaurwa munguva chaiyo.
Nekudaro, mamaneja achave nesimba rekuvandudza chirongwa zvinoenderana nezvakakurudzirwa neAI data. Iyo purogiramu ichave yakadzikama, isinganetsi uye iri nyore kana ichienzaniswa neyakaitika maitiro.
2. Kusasarura maitiro ekuongorora
Hapana mubvunzo kuti Data management nderimwe remabasa akabatikana zvikuru kushanda pariri. Izvi zvinotonyanya kutyisidzira pane kuronga nekuti zvinoda kuti uchengete track yeese seti. Rimwe remabasa mariri kuongorora kwekuita. Pano, mushandi anoramba achitenda kuti ivo vari kutongwa nenzira isina rusarura asi kuzviisa pasi chinhu chinouya pakati.
Izvi zvakaita kuti iye afunge kuti maneja ari kuzviisa pasi kana kurerekera apo achiongorora huwandu hwebasa uye mhando. Apa ndipo apo chakagadzirwa Intelligence inogona kubatsira zvakanyanya. Ndiyo fomu yakanakisa yekubvisa tsika yakasarudzika mumahofisi kuti iongororwe. Iko kuita sarudzo kunoenderana nefomu yechinangwa kupa nzira nyowani kumakambani.
Imi mese makadaidzira kuchengetwa nevatengi uyezve magamuchira meseji ichikumbira chiyero uye kuongororwa kwevakuru. Izvi zvinounganidza yakawanda dhata iyo inova yakaoma kuongorora nemaneja. Nekudaro, iwe haugone kufunga kuti mhedzisiro ichaenderana nedata rakatorwa kuti riuye nechati chekuita.
Asi AI iri kuita kuti iri basa rive nyore nekudzvanya kamwe chete. AI-based system inogona kuchengeta zvinyorwa zvemushandi anonoka kubasa uye anogona kuburitsa zviyero zvinoenderana nezvinyorwa zvavo zvebasa zvichipa data rakanyatsoshanda. Izvi zvinoguma nekubvisa sarudzo dzakasarudzika dzemaneja.
3. Kuwedzera kwekuita
AI inogona kubvisa zviri nyore izvo zvinodikanwa zvekufungidzira uye inogona kubatsira mukuita kuti data riwedzere kuvharika zvichikonzera nhengo dzinoita uye dzinofara dzechikwata. Kana iwe uchida kuwedzera tsika yekambani saka zvakakosha kumisa hurongwa nemazvo. Semarekodhi, zvikamu makumi manomwe kubva muzana chete zvevashandi vanogutsikana nemabasa avo asi vamwe vasiri kupa kana kuregedzerwa pabasa. Pane dzimwe nguva apo varongi nemaneja vanoiswa munzvimbo inoda resource liquefaction uye kusangana bhizimisi kuda. Izvi zvinoguma nekuomerwa kwezvinodiwa nevashandi uye kugona kuchengetedza chiyero.
Panyaya yekuronga vashandi, chinetso chikuru ndechekunzwisisa uye kuda kwevashandi. Unogona kutaura kuti kana mushandi ari kuisa mari inopfuura awa mukufamba achienda kuhofisi asi achidzoserwa nekuda kwekushomeka kwevatengi anobva anzwa kunetseka. Nekudaro, kune marongero anoti vashandi vanofanirwa kubhadharwa zvinoenderana nemaawa avo ekushanda. Asi kana vashandi vakaenda kumusha kusati kwapera kwekuchinja saka iko kurasikirwa kwevanhu vese.
Nekune rumwe rutivi, kana pazuva risina kubatikana, paine vatengi vakawanda kupfuura zvinotarisirwa ipapo vashandi vanoshanda vanozonetsekana asi vamwe vachizonetsekana nekuda kwechiziviso chipfupi. Nekudaro, AI inogona kufanotaura zviri nyore mwero wekushanda kana kumhanya kwezuva rinotevera kana vhiki kuronga nemazvo. Vachafunga zvisingatarisirwi zviitiko kuronga kudiwa kwevashandi uye kuronga kuitira kuti vashandi vako vafare.
Izvi zvinogona kubatsira mushandi kuronga kunze kwavo zviitiko uye nekufamba kuitira kuti pasave nechinhu chinosara kumashure. Nekudaro, zvinozokonzeresa mukutonga kwakawanda pamusoro pehupenyu kune vashandi vachivagutsa, iyo inofara uye yakawedzerwa mwero wekugadzirwa. Zvese zvaunoda muenzaniso wehungwaru.
AI ine akawanda mabhenefiti anogona kushandiswa mune bhizimisi kuve nechokwadi kuti iri kushanda nenzira yakapfava. Kune mushandi, iko kugutsikana kwebasa uku kune mamaneja, iri nyore kupatsanura kwebasa iro rinobva rawedzera kunaka kwebasa. Pamusoro peizvi, izvi zvichabatsira mukumhanyisa kambani padanho rakajairwa kuti ive nechokwadi chekubudirira mumusika wepasi rose. Zvakare, hazvizobatsiri chete mushandi mumwe chete asi timu yese inowedzera tsika izvo zvichabatsira mukusimudzira bhizimisi kukura nekubudirira.
Kutsvaga AI mhinduro yesangano rako? Taura nekutaurirana